Tanora Montenegrin mamoaka hira manohitra ny ady, ho an’ireo ankizy ao Okraina · Global Voices teny Malagasy
'Atsaharo ny daroka baomba, avereno ny nofinofinay...'
Voadika ny 27 Marsa 2022 16:24 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Español, українська, Esperanto , عربي, 繁體中文, русский, Français, English
Komnen Vuković sy Milica Radan. Sary: avy ao amin'ilay lahatsary YouTube navoakan'ny Vijesti. Fampiasàna ara-drariny.
Nivoaka voalohany tao amin'ny Meta.mk ity lahatsoratra ity. Dika nokiraina no averina avoaka etoana eo ambanin'ny fifanarahana iray hifampizara votoaty nifanaovan'ny Global Voices sy ny Orina Metamorphosis.
Ny 17 Martsa, ireo tanora Montenegrin mpihira, Milica Radan sy Komnen Vuković, niaraka tamin'ny antokom-pihira D-mol, dia namoaka lahatsary iray ho an'ilay hiran-dry zareo manohitra ny ady “Vratite nam snove” (“Avereno ny nofinofinay”), natao manokana ho an'ireo ankizy ao Okraina.
Ilay hira dia hafatra iray mitaky ny hampitsaharana ny ady izay nanomboka tamin'ny 24 Febroary, andro nanaovan'i Rosia ny fananiham-bohitra tao Okraina, ary ho fampiroboroboana ny fiaraha-miory amin'ireo ankizy miaritra ny mafy. Misy dika amin'ny fiteny anglisy ao anatin'ilay lahatsary.
Atsaharo ny daroka baomba, avereno ny nofinofinay,
ny tanamasoandronay, izay matahotra haizina.
Izahay no tafiky ny masoandro, izahay no tafiky ny hasambarana,
Noho ny aminay no ihodinan'ny planetan'ny fandriampahalemana.
Lahatsary navoakan'ny Vijesti, mpanonta gazety malaza, TV ary tranonkala, izay isan'ireo media mpitari-kevitra ao Montenegro.
Marijana Kadić Bojanić no nanoratra ny tonon'ny hira, raha an'i Danijel Alibabić kosa ny mozika.
Tanaty antsafa iray ho an'ny Balkansmedia.org, Kadić Bojanić dia nilaza fa ny sary ampitain'ny ady ao Okraina — ankizy tafasaraka amin'ireo havan-tiany, trano rava, laharan'olona mpitsoaponenana, ny hirifiry, ny fisalasalàna — dia mamoha ao anatiny ilay alahelo faran'izay lalina indrindra, ary koa nanaitra ny faniriana hanao zavatra, na dia kely monja aza, izay mety handrisika ho amin'ny fahatakaran'ny olona rehetra ny finiavana tsara sy hanosika azy ireny hiroso hiasa.
Ireo sarina fangirifirana dia namerina tamiko ireo fahatsiarovana voafafa momba izay niaretanay rehetra mponina tao amin'ilay faritra Yôgôslavia taloha, nandritra ny andian-taona 1990 fony nifarana noho ny horohoro vokatry ny ady ny fahazazàko tony sy feno nofinofy (angano).
Etsy ankilany, ny media iasàko dia manana fàka ao anatin'ny fikatrohana manohitra ny ady, ilay mpanaramaso isankerinandro Monitor, ary hatramn'ny gazety, Tv sy vavahadin-tserasera anaty aterineto Vijesti sy ny Ivontoerana ho an'ny Asan-gazety Fanadihadiana. Nanandratra ny feony hatrany ny mpanorina azy ireo, nanohitra ny tsy rariny sy ny herisetran'ny matanjaka. Izany rehetra izany dia nanosika ahy hanoratra ilay hira, indray mifaoka tsy miverina, tamin'ny fotoana nanomànako niaraka tamin'ireo namako ny hetsika fanampiana iray noho ny maha-olona ho an'ireo ankizy ao Okraina…
Ilay hira “Vratite nam snove” dia nolalaovina voalohany tao amin'ny Fetibe Iraisampirenena natokana ho an'ny Hiran'ankizy “Zlatna Pahulja” (“Golden Snowflake”) tao Rožaje.
Manana lovantsofina efa 28 taona ilay fetibe, ary tamin'ity taona ity dia natao tamin'ny 4 sy 5 Martsa, fitambarana seho roa amin'ny alina, ny voalohany ho an'ireo eo an-tanàna, ary ny faharoa ho an'ireo mpisehatra iraisampirenena, anasongadinana ireo ankizy avy amn'ireo firenena manodidina.
Ampiasain'ny Vijesti ilay hira mba hampiroboroboana ireo hetsika noho ny maha-olona hanampiana an'i Okraina. Ny voalohany dia takariva fakàna tombony tao Podgorica tamin'ny 10 Martsa, izay nahazoana fanomezana nitentina 10.000 euros.
Noho ny fangatahan'ireo mponina ao an-toerana, nisy hetsika tsy misy hafa amin'io nokarakarain'ireo fikambanana sivily tao an-tanànan'i Bijelo Polje tamin'ny 23 Martsa, ho toy ny fomba iray hanampiana ireo Okrainiàna mpitsoaponenana nampiantranoina tao amin'izany tanàna izany hatramin'ny nisian'ny fananiham-bohitra rosiàna. Amin'izao fotoana izao, ny hôtely iray ao an-toerana dia mampiantrano fianakaviana 14 misy olona 36, izay nisaotra ireo olompirenena ao an-toerana sy ireo mpandraharaha noho ilay hetsika.
Raha mila vaovao misimisy kokoa momba ity lohahevitra ity, jereo ny fandrakofanay manokana ny “Rosia manani-bohitra ao Okraina” [Angl.]